ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် 2014 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် 2014
Posted by padonmar on Mar 31, 2014 in Creative Writing, Short Story | 15 comments
ဒီနှစ် ဇာတိမြေ အပြန် ချစ်စဖွယ်ကလေးလေးတွေအတွက် ဝါးခယ်မသားလေးရဲစည်၊ချင်ကျားပူက မမဂျီးခိုင်ဇာ၊ဆိုက်ကားသမီးဘခက် မနှင်းပြုံးတို့ ကူညီအားဖြည့်တဲ့ စာရေးကိရိယာအစုံကြောင့် ကလေးတွေကိုယ်စား အပျော်ကြီးပျော်နေမိပါတယ်။
ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးနေခဲ့ပါတယ်။
၂ရရက်နေ့ နံနက်အစောကြီး ၂နာရီ ၃ဝ ကတည်းက အိမ်က ကားမောင်းထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
လမ်းတလျှောက်ကတ္တရာနဲ့ ကောင်းကောင်းမောင်းလို့ရပေမယ့် ရွှေလောင်းအလွန်ကစပြီး လမ်းကြမ်းလာတာကြောင့် ဖြည်းဖြည်းမောင်းရတာ ၁၄မိုင်ခရီးကို မိနစ် ၄ဝ မောင်းရပါတယ်။
ကျမတို့ မြို့ကိုရောက်တော့ နံနက် ရနာရီထိုးပါပြီ၊နာမည်ကျော် စာတိုက်လမ်းမုန့်ဟင်းခါးကို အမီပြေး၊
တယောက် ၂ပွဲစီစားလိုက်ကြပြီးတော့ မောင်နှစ်မတသိုက် သုသာန်ကို ချီတက်ကြပါတယ်။
နှစ်စဉ် မိဘ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ အုတ်ဂူကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ကန်တော့ကြရတာ ထုံးစံပါ။
ကျမတို့လိုပဲ အခြားမိသားစုတွေလည်း မြို့ကိုပြန်လာပြီး သူတို့ဘိုးဘွားမိဘတွေကို ကန်တော့ကြတာကြောင့် သုသာန်မှာ စည်ကားနေပါတယ်။အနီးတဝိုက်က ကလေးတွေကလည်း အဲဒီမိသားစုတွေ ကန်တော့တဲ့ မုန့်တွေကို စောင့်တောင်းကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ သူ့ထက်ငါ လုယူကြပါတယ်။
ကျမတို့မိသားစုဆိုရင်တော့ လုရင်မပေးတော့ဘူး ဆိုတာ ကလေးတွေက မှတ်မိနေကြပါတယ်။
ဒီနှစ် ကျမတို့ရောက်တာနဲ့ `ဟေ့ ၊မလုကြနဲ့၊တန်းစီပြီး ဘုရားစာ ဆိုပြရမှာကွ´လို့ သူတို့ အချင်းချင်းသတိပေးကြပါတယ်။
ကျမက ရဲစည်ပေးလိုက်တဲ့ လိပ်ပြာရောင်စုံလေးတွေ တပ်ထားတဲ့ဘောပင်လေးတွေပြပြီး လိုချင်ကြလား ကလေးတို့ ဆိုတော့ အားလုံးပဲ ဝမ်းသာအားရ ထအော်ကြပါတယ်။
ဘောလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအဆင် ဂါဝန်နဲ့ သမီးငယ်လေးဆို ဘုရားစာ ဆိုပြမယ် တပြင်ပြင်နဲ့ပေါ့။
ကျမက `ကျောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေ အရှေ့ဖက်ထိုင်၊ကျောင်းမနေတဲ့ကလေးတွေ အနောက်ဖက်ထိုင်၊
ကျောင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမှ စာရေးဖို့ ဘောပင်ပေးမယ်။ ကျောင်းမနေတဲ့ကလေးတွေကို မပေးဘူး ´လို့ ပြောလိုက်တော့ အဲဒီသမီးလေး စိတ်ကောက်သွားပါတယ်။ `ဘောပင်လိုချင် ကျောင်းနေပေါ့ ´ဆိုတော့ `ကျောင်းမနေပါဘူး ´လို့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး ကောက်ပြပါတယ်။ သူက မူကြိုတက်နေတာလို့ ဘေးက ဝိုင်းပြောကြတာနဲ့ `နောင်နှစ်ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘောပင်တချောင်းပေးမယ်´ လို့ အပေးအယူလုပ်တော့မှ ရီပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်။့ ချစ်စရာပန်းကလေးတွေပါ။
ကျောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေကို စာမေးကြည့်ပြီး ဖြေနိုင်တဲ့ကလေးတွေကို ဘောပင် ၂ချောင်း၊၃ချောင်းစသည် ဆုချပေးလိုက်ပါတယ်။၄တန်းသမီးတယောက်က ဟေတုပစ္စယော ဆိုပြမယ်ဆိုပြီး ပဋ္ဌာန်း ၂၄ပစ္စည်း အကျဉ်းကို ဂျောင်းဂျောင်းပြေး ဆိုပြသွားလို့ ဘောပင် ၃ချောင်းဆုချလိုက်ပါတယ်။
ကျန်ကလေးကြီးတွေကလည်း ကဗျာရွတ်သူက ရွတ်ပြကြပါတယ်။ ဘာဆိုရမှန်းမသိတဲ့ ကလေးတွေကို ၅ အလီဆိုပြကြကွာ ဆိုတော့ လွယ်လွယ်လေး ဆိုပြီး အပြန်ပြန်အလှန်လှန်တောင် ဆိုပြကြပါသေးတယ်။
ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပြသွားတဲ့ သမီးက `၁၆ အလီတောင်ရသေး ´ဆိုပြီး တဒေါက်ဒေါက်ရွတ်ပြလို့ ဘောပင်တွေ အများကြီးထပ်ရသွားပါတယ်။
ကျောင်းမနေတော့တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းမတက်ရသေးတဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ နောင်နှစ် ကျောင်းတက်ပါမယ် ကတိတောင်းပြီး ဘောပင်တချောင်းစီ ပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတွေအကုန်ပေးအပြီး ဘောပင် ၁ချောင်းကျန်တာနဲ့ `ဒီဘောပင်ဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲ´လို့မေးတော့ သမီးကိုပေးပါ သားကိုပေးပါ ဆိုပြီး သူ့ထက်ငါ တောင်းကြပါတယ်။
`သားတို့သမီးတို့က ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူကို ဦးစားပေးတတ်ရမယ်။ကိုယ့်မှာ ဘောပင်တွေရပြီးရင် ထပ်မလိုချင်ရဘူး´ လို့ပြောပြတော့ ထောင်နေတဲ့ လက်ကလေးတွေ ချသွားကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ အဲဒီဘောပင်လေးကို နောက်ဆုံးမှရောက်လာလို့ ဘောပင်မရသေးတဲ့ ကလေးကိုပေးမယ် သဘောတူလားဆိုတော့ သဘောတူကြပါတယ်။
မုန့်တွေလည်း ညီတူမျှတူဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံး အလှည့်ကျ လူစေ့အောင်ရမယ်။လုဖို့ လက်ထောင်လာတဲ့သူကို မပေးဘူးလို့ ပြောထားတော့ ကလေးတွေ မလုပဲ စည်းကမ်းရှိရှိယူကြပါတယ်။
ကျမတို့ သုသာန်ကနေပြန်တော့ ဘောပင်လေးတွေ မြှောက်ပြပြီး နှုတ်ဆက်ကျန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခိုင်ဇာ့လက်ဆောင်၊မနှင်းပြုံးလက်ဆောင်နဲ့ ရဲစည်ရဲ့ ကျန်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတာ နောင်မှ ဆက်ရေးပါရစေ
ကျောင်းမတက်တဲ့ကလေးတွေကို ဘောပင်မပေးဘူးဆိုလို့ စိတ်ကောက်နေတဲ့ သမီးငယ်လေး
နောင်နှစ်ကျောင်းနေမယ်ကတိပေးရင် ဘောပင်တချောင်းပေးမယ်ဆိုမှ ရီနိုင်တော့တယ်။
ဟေတုပစ္စယော ရွတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ ၄တန်းကျောင်းသူကြီး
ကဗျာရွတ်ပြသွား သူကလေးကလည်း ၄တန်းပါပဲ
တချောင်းတည်းကျန်တဲ့ ဘောပင် ဓာတ်တော်ဝေခန်း
ဘောပင်တွေနဲ့ ပြုံးပျော်နေတဲ့ ပန်းကလေးများ
ကလေးငယ်တွေ. . .
တကယ့်ကိင ပန်းကလေးများလို ဖူးပွင့်ဝေဆာမှာပါ. . .
ဦးဦးရွဲစီ ပေးတဲ့ ခဲတံလေးတွေ ကလေးတွေ မပြောနဲ့။
နောက်ခါဆို လွယ်အိပ်လေးတွေပါ လိုမလားမသိ။
သာဓု… သာဓု… သာဓု… ပါဗျာ…
အာဟင့် ချိတ်ကောက်မယ်… ကျောက်စ်မောင်နှံကို သတင်းမပေးလို့…
ကျောက် အံဆုံး ပေါက်နေတုန်းက။
တားလဲ ကဗျာရွတ်ပမယ်… နားထောင်
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေ မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာ… နောက်တစ်ခါ သွားလှူဖြစ်ရင်ပြောပါဦး ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် လှူချင်လို့ပါ ခမျာ….
ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေက ကလေးတွေအတွက် အပင်ပန်းခံလှူနေတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့ကို အားကျလို့ တနိုင်လုပ်အားလေးပါ။
အားပေးကြတဲ့ ကေဇီ၊ဦးကျောက်၊ဝိုး၊အလက်ဆင်း၊အောင်ကြူး တို့ကို ကျေးဇူးပါ။
ဒီကလေးတွေကို ကျမပေးချင်တဲ့ မတ်စိက
(၁)သူတို့ဟာ သူများ သနားလို့ ပေးတာလေးတွေကို လုယူတောင်းယူနေရတာ မဟုတ်ပဲ သူတို့ တတ်သင့်တဲ့ စာတတ်လို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ဆုကို ကြိုးစားယူခွင့်ရှိသူတွေဆိုတာ သိစေချင်တယ်။
(၂)သုသာန်နားနေပေမယ့် သူတို့လည်း လူထဲကလူတွေပါပဲဆိုတာ သိရမယ်။
(၃)တော်သူဟာ တော်သလောက် ခံစားခွင့်ရှိတယ်လို့ ခံယူရမယ်။
(၄)သူတို့စိတ်ထဲ သူတပါးကို ဦးစားပေးချင်တဲ့ ပရစိတ်လေး နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် မွေးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီမက်ဆေ့ချ် ပေးခွင့်ရအောင် ချစ်စရာ ရောင်စုံဘောပင်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ ရဲစည်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆိုင် က ထဲ့ တဲ့ သူ က သေ ချာ ထဲ့ မ ပေး
ဝယ် တဲ့ သူ က လဲ နေ ပူ လို့မူး နေ တော့
သေ ချာ မ စစ် နိုင်
ပစ္စည်း တ ချို့ ကျန် ခဲ့ တယ် မ ပ ဒု မ္မာ ရေ
ခု ချိန် ထိ ကို သွား မ ယူ ဖြစ် သေး တာ တဲ့
အင်​း ဆိုင်​လား မဆိုင်​လား​တော့မသိ ကြုံလို့ ဝင်​​ပြောလိုက်​ရဦးမယ်​ ကျုပ်​တို့အရပ်​က ​တောမကျ မြို့မဟုတ်​ဗျ ။ ၁ဝနှစ်​အတွင်​းမှာ သုဿန်​က ၃ ​နေရာ​တောင်​​ပြောင်​းပြီးပြီ ။ အစကနဦး​နေရာက မြို့နဲ့နီးတယ်​​ဗျ …..။ ​သေသူကို လှည်​း​ပေါ်တင်​ ​နောက်​က​နေတွန်​းလို့ပို့ကြ ​ပေါ့ ။ အဲ့​နေရာက​နေ ​နောက်​​နေရာ​ပြောင်​း​တော့ ဂူ လုပ်​ထားနိုင်​တဲ့သူတစ်​ချို့ပဲ ​နေရာသပ်​သပ်​မှတ်​မှတ်​​ရွှေ့ကြဗျ ။ သိ်​​်​ပ်​မကြာပါဘူး အဲ့မှာ ၂နှစ်​​လောက်​​နေ​တော့ မြို့နဲ့ ခုနှစ်​မိုင်​​လောက်​​ဝေးတဲ့​နေရာထပ်​​ရွှေပြန်​​ရောဗျို့ ။ အဲဘယ်​သူ​တွေက ကိုယ်​့ဘိုးဘွား မိဘ​တွေ ​နေရာလိုက်​​ပြောင်​း​ပေးနိုင်​လဲ ဆယ်​​ယောက်​​တောင်​မရှိ​တော့ဘူးဗျ ။ မီးသဂြိုလ်​စက်​ကို ​ဆောက်​ပီး​တော့ ​မြေ​တောင်​မြုပ်​စရာမလို​တော့ ။ ပို့ပီးတာနဲ့တန်​းပြန်​ ။ တတ်​နိုင်​တဲ့သူ​တွေက အထိမ်​းအမှတ်​ တိုင်​​လေးစိုက်​လို့ ။ မစိုက်​နိုင်​တဲ့သူကများပါတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ခုလုပ်​ထားတဲ့ သုဿန်​က ​နေရာကျဉ်​းတယ်​ဗျ ။ ​မောင်​ပလဲဆင်​့ လား အဲ့ ​ဟော်​တယ်​ရဲ့ အ​ရှေ့ဘက်​​လောက်​ကျမယ်​နဲ့ တူတယ်​ ။ ​တောင်​ ခါးပန်​း​ပေါ်မှာ ။ ဆို​တော့ကာ သုဿန်​ကို သာမာန်​သူ ကပ်​​နေလို့မရဖူး ။ အနီးက ရွာ​တွေက​တော့ စိတ်​ညစ်​လို့​ပေါ့ဗျာ ။ မီးသဂြိုလ်​တာ ဒီဇယ်​နဲ့ကိုး​ညှော်​တယ်​တဲ့ ။ က​လေး​လေး​တွေက သနားဖို့​ကောင်​းတယ်​ဗျာ ။ သူတို့မှာမှ ကပ်​​နေစရာ ရှိ​သေး ။ ကျုပ်​တို့ဆီမှာ​တော့ စရိုက်​စုံ ရပ်​ကွက်​တစ်​ခုရှိဗျ ။ အ​ကြောင်​းကိစ္စ မရှိပဲ မသွားရဲကြဘူး ။ အဲ့ဒိရပ်​ကွက်​ထဲသွားရင်​ ဘာလိုလို အ​ပြောခံရမှာ ​ကြောက်​လို့ ။ အဲ့လိုကိုနာမယ်​ကြီးတာ
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေပေါ်မှာတော့ အရိပ်မထိုးစေချင်ဘူး။
ကလေးဆိုတာ ဖယောင်းရုပ် ရွှံ့ ရုပ်ကလေးတွေပါ။